लाेपाेन्मुख राउटेहरु अब दैलेख गुराँसका बासिन्दा हुने, कसरी हुन्छन् सामाजिकीकरण ? (अन्तरवार्ता) – Online Jagaran
सुर्खेत, २४ असार (जागरण) । लोपोन्मुख समुदाय राउटे अब गुराँस गाउँपालिकाको स्थायी नागरिक घुमन्ते जीबन बिताउँदै आएका राउटेलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले आफ्नै स्थायी नागरिक बनाउने भएको छ । गाउँपालिकाले अब राउटेहरुलाई पनि परिचयपत्र दिएर आफ्नै नागरिक बनाउने तयारी गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उनीहरुको नाम, थर खुल्नेगरी परिचयपत्र वितरण गर्न परिपत्र दिएसँगै अब राउटेहरुको स्थायी ठेगाना गुराँस गाउँपालिका दैलेख कायम हुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीसँग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलाई जागरणकर्मी प्रभा रावतले सबैभन्दा पहिला घुमन्ते जीबन बिताउँदै आएका राउटेहरु एकै ठाउँमा बस्लान् त ? भनेर सोध्नुभएको छ । सुन्नुस् यो कुराकानी (अडियो) ।
जनताको आवाजः योजना सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने दौडधुप रोक्न बजेट समयमै आउनुपर्छ (अडियाेसहित)
बगैचामै स्याउ व्यवस्थापनबारे तालिम (अडियोसहित)
५ माघ २०७७, सोमबार ०६:२१ January 18, 2021 जागरण
ताँजकोटको समृद्धिका लागि गजबका योजनाः अध्यक्ष मल्ल (अडियोसहित)
१५ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:०१ July 31, 2018 जागरण
महिलालाई आयआर्जनतर्फ आकर्षित गर्दै नलगाड (अडियोसहित)
२९ आश्विन २०७५, सोमबार ०७:०५ October 15, 2018 जागरण